कम चिनी मिक्सरहरू Class क्लासिक टकिला ककटेलहरूमा प्रयोग गर्नको लागि - प्युरव - खाना
कसरी कम कम चिनीको साथ5क्लासिक टकीला ककटेलहरू बनाउने
How Make5Classic Tequila Cocktails With Way Less Sugar
टाको म Tuesday्गलबारदेखि आइतवार ब्रन्च सम्म हामी केवल टकिला ककटेलको लागि पर्याप्त मात्रामा प्राप्त गर्न सक्दैनौं। तर एक पेय (वा दुई) मा तपाईले सोचे भन्दा धेरै चिनी पाउन सक्दछ। त्यसोभए, कसरी तपाईं आफ्नो खुशीको घण्टाको त्याग नगरी फेरि काट्न सक्नुहुन्छ? यहाँ पाँच टकिला ककटेलहरू र उनीहरूका परम्परागत रेसिपीहरू छन्, सजिलो, कम चिनी विकल्पहरूको साथ, ताकि तपाईं तिनीहरूलाई हलुका देख्न सक्नुहुनेछ जस्तो तपाईं फिट देख्नुहुनेछ। हामी प्रयोग गरिरहेका छौं डन जुलियो ब्लान्को टकिला , जुन १०० नीलो आगावेबाट बनेको छ र कुराहरुको छ, citrusy स्वाद नोट्स कि यी ककटेलमा आफैलाई सुन्दर ढंगले उधारो दिन्छ, र डन जुलियो रिपोसोडो टकीला , जुन सेतो ओक ब्यारलमा चिल्लो, धनी फिनिशको लागि उमेर भएको छ।
ताजा नीबूको जुसको लागि बोतलको खट्टा मिश्रण व्यापार
आह, मार्गारीटास। हामी लिन्छौं क्लासिक , मिश्रित, फल , मसलादार , निलो — तपाईले यसलाई नाम दिनुहुन्छ। तर यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि बोतलको खट्टा मिक्स र ट्रिपल सेक्टर चिनीले लोड गरिएको छ। एक औंस ट्रिपल सेकेन्डले पूरै grams ग्राम चिनी प्याक गर्दछ, जबकि उही मात्रामा खट्टा मिक्सको6ग्राम हुन्छ (र अधिकतर मार्गरिटाहरू कम्तिमा तीन औंस सामानको साथ बनाईन्छ)। सब भन्दा सजीलो फिक्स पनि ककटेलको जरामा साच्चै साघुँरो हुन्छ: भण्डारमा खनिज खोर्सानीको सट्टा ताजा निचोलेको चुनाको रस, जसमा प्रति कप मात्र grams ग्राम चिनी हुन्छ। यसको स्वाद ताजा, सिट्रोसी र साँच्चिकै तीखो, केही बोतलको मिक्स भन्दा बढी जो मिठो मिठो हुन्छ। यो पनि हो कि डन जुलियोले उनीहरूको मार्गारीटा सिफारिश गर्दछ किनकि साधारण सामग्रीहरू र ताजा चुनाले टकीलाको नोटहरू वास्तवमा चम्काउन अनुमति दिन्छ।
अरूलाई मद्दत गर्ने सोच
यदि तपाईंले ट्रिपल सेकेन्ड याद गर्नुभयो भने, तपाईंको मार्गरेटमा सुन्तलाको अलिकता निचो गर्नुहोस्। यो सुन्तला रक्सी जस्तो सिरप र रेशमी हुनेछैन, तर यसले तपाइँलाई वास्तविक चिनी थपे बिना पेयमा केही प्राकृतिक मिठास थप गर्दछ। यदि ताजा सिट्रस जुसको साथ तपाईंको स्वादको लागि पेय धेरै एसिडिक छ भने, तपाईं एक झिल्ली थप्न सक्नुहुन्छ कम क्यालोरी अगावे स्वीटनर वा पानी र शून्य क्यालोरी मिठाईको रूपमा भिक्षु फल वा स्प्लेन्डासँग तपाइँको आफ्नै चिनी-मुक्त सरल सिरप बनाउनुहोस्। तपाईं फल purée को एक छप जोडी को लागी (केहि स्ट्रबेरी वा आम भाग लामो यात्रा गर्न सक्छ) वा कम क्यालोरी फल रस गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ सँधै नियमित आगावे वा मह हुन्छ - केवल यो कुरा जान्नुहोस् कि प्राकृतिक मिठाईहरू, परिष्कृत सेतो चिनीको तुलनामा स्वस्थ भएता पनि, अझै चिनीको मात्रा उच्च हुन्छ।
विधि प्राप्त गर्नुहोस्
ग्रेपफ्रूट सेल्टजरका लागि अंगूरको रस व्यापार गर्नुहोस्
ठीक छ, तपाईलाई लाग्छ ताजा-निचोरेको ग्रेपफ्रुटको जुसमा बोतल पसलहरू भन्दा कम चिनी छ जुन तपाईले सुपरमार्केटमा किन्नुहुन्छ। तर दुबैमा एक कप अपरिहार्य १ to देखि २२ ग्राम प्राकृतिक चिनी हुन्छ। यदि तपाईं बिटरवीट ग्रेपफ्रुट स्वाद राख्न खोजिरहनु भएको छ तर चिनी निकाल्नुहोस्, अpe्गुरको फल, वा स्पार्कलिंग पानी सजिलो विकल्प हो। यो चिनी- र क्यालोरी-मुक्त छ, त्यसैले तपाईं वास्तवमै त्यो भन्दा एक दुबला मिक्सर पाउन सक्नुहुन्न। यदि तपाईंलाई टकीला सन्तुलनको लागि केहि आवश्यक छ भने, ग्लास ज्यादातर क्लब सोडा र केवल एक स्प्ल्याश (वा दुई) तपाईंको सामान्य अंगूरको रसको साथ भर्नुहोस्। यसले चिनीको केही ग्रामहरू समावेश गर्दछ, तर ककटेल पिउन कुनै मतलब छैन तपाईंले आनन्द लिइरहनु भएको छैन। हाम्रो पुस्तकमा यो सँधै लायक हुन्छ।
Ody. खूनी मारिया
ताजा टमाटरको रस वा डाइट ककटेल मिक्सको लागि सब्जीको रस व्यापार गर्नुहोस्
यहाँ शुभ समाचार छ: खूनी मारियास (रमाईलो मरियम भोडकाको सट्टा टकिलाको साथ बनेको छ) चिनीले आशै पक्कै छैन। आठ-औंस स्टोर-खरिद गरिएको, कम-सोडियम तरकारीको रसमा लगभग grams ग्राम चिनी हुन्छ, अन्य धेरै सामान्य मिक्सरहरू सोडा वा खट्टा मिक्स जस्तै भन्दा कम। तर यदि तपाइँ जहिले पनि पिन्ट गिलासबाट रगत पिउनुहुन्छ वा एक भन्दा बढि हुनुहुन्छ भने, यसले छिटो थप्न सक्छ - विशेष गरी यदि तपाईंले आफ्नो गिलासमा एक लाख अतिरिक्त थप्नुभयो भने (हामी तपाईंलाई हेरिरहेका छौं, म्यापल क्यान्डिड बेकन)। यदि तपाईं टमाटरको रस आफैं बनाउनुहुन्छ भने, प्रति सेवा कुल चिनी उस्तै हुनेछ, तर तपाईंलाई कुनै पनि थपिएको लुकेको अवयवहरूको बारेमा गडबड गर्न आवश्यक पर्दैन। यदि टमाटर वा तरकारीको रसको आधा सामान्य मात्रा प्रयोग गरेर यसलाई काट्ने छैन भने, कम क्यालोरीको बोतलको मिक्सहरूमा फर्कनुहोस्। उदाहरणका लागि, यो खूनी मैरी मिक्स कम कार्ब, केटो-मैत्री छ र केवल १ ग्राम चिनी प्रति कप सेवा गर्दैछ। हामी शर्त गर्छौं कि यो एउटा स्वादको उत्कृष्ट हुन्छ रगत पनि।
Te. टकीला सूर्योदय
सुगन्धित पानीको लागि सुन्तलाको रस व्यापार गर्नुहोस्
आठवटा औंस धेरै भण्डारमा खरीद गरिएका OJ मा लगभग १ to देखि २२ ग्राम चिनी हुन्छ। यदि तपाईं कम चिनीको विकल्प चाहानुहुन्छ भने, स्वादयुक्त स्पार्कलिंग पानी तपाईंको साथी हो। हामी यो प्रेम गर्दछौं सुन्तला रंगको स्पार्कलिंग पानी किनभने तपाईंले स्पष्ट रूपमा ककटेलको सुन्दर सूर्यास्त प्रभावलाई पूर्ण रूपमा बलिदान दिन आवश्यक पर्दैन सुन्तला रंग पनि ठीक काम गर्दछ। ग्रेनेडाइन पनि प्रतिस्थापन गर्न चाहनुहुन्छ? यसमा प्रति चौथाई औंस grams ग्राम चिनी छ, र यदि तपाईं यसलाई नाप्नुको सट्टामा आफ्नो पोखरीमा आँखा लगाउँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सम्भवतः त्यो भन्दा बढि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। क्रैनबेरी, अनार र चेरीको रस ग्रेनेडाइन जत्तिकै घन छैन (यसको मतलब तिनीहरू तल डुब्दैनन्), तर तपाईं उही मात्रा चिनीको लागि चार गुणा बढी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको पेय सामान्य भन्दा गुलाबी बन्न सक्छ, जुन हाम्रो मनपर्ने प्रकारको सूर्योदय हो।
Mexican. मेक्सिकन हट चकलेट
कोको र चिनी रहित स्वीटनरको लागि व्यापार चकलेट पाउडर
वयस्क तातो कोको जस्तो गर्जने आगोको लागि कुनै मेल छैन। मेक्सिकन तातो चकलेट अझ धेरै, किनकि यसले आत्मालाई टेकीला र मसलाले मिर्ची पाउडर र दालचिनी जस्ता गरम गर्दछ। तीन चम्मच चकलेट पाउडरमा १ grams ग्राम चिनी हुन्छ, जबकि तातो चकलेट मिक्सको एक प्याकेट9देखि ११ सम्म कहिँ पनि हुन सक्छ, अर्कोतर्फ, कोको स्वाभाविक रूपमा चिनी रहित छ। हो! तर पर्खनुहोस्: टकीला, कोको र मसलाको बीचमा, तपाईं सम्भवतः यसलाई कुनै चीज मीठो बनाउन चाहानुहुन्छ। हाम्रो जाने छ चिनी-रहित भनिला सिरप किनकि यसले मिठो मिठाईको भण्डारमा किनेको कोकोको मिक्स्लाई मद्दत गर्दछ, तर स्प्रेटर शून्य क्यालोरी स्वीटनरले पनि काम गर्दछ। तपाईं सर्टकट लिन र कोकोलाई छोड्न सक्नुहुनेछ, साग-फ्री चकलेट सिरपको सट्टा प्रयोग गरेर।
तपाईंले प्रयोग गर्नुभएको दुधले पनि फरक पार्छ। सम्पूर्ण दुधको सेवा गर्नेमा ११ ग्राम चिनी हुन्छ। दुर्भाग्यवश त्यो विभागमा स्किम दुध राम्रो छैन। तर चिन्ता नलिनुहोस्, अनवेन्ट नगरी दुग्ध दुधले पूरै दिन बचाउन सक्छ ( जईको दुध प्रति कप २ चिनी चिनी मात्र छ र बदामको दुध कुनै पनि छैन)। अगाडि बढ्नुहोस् र फ्याट-फ्री ह्वाइड टापिंगमा पाइल्स गर्नुहोस्। तपाईं यसको योग्य हुनुहुन्छ।
कुन फलमा बढी प्रोटिन हुन्छ
सुक्खा, संवेदनशील छालाका लागि उत्तम अनुहार नमी
अंडाकार अनुहार आकार को लागी हेयरस्टाइल
कुन केश शैली अंडाकार अनुहार सूट गर्दछ
कम क्यालोरी पास्ता व्यंजनहरु
Tartar नुस्खा को क्रीम
सर्वश्रेष्ठ हत्या अनुसन्धान चलचित्रहरू